That's so good, right?: November 2011
ကျွန်တော် ရပ်ဝေးမြေခြား ဟောဒီ Big Apple
မှာနေထိုင်ရတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ အဆင်ပြေတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့။ ကျွန်တော်
မကြာခဏ ကြုံတွေ့ဖြစ်တဲ့ ရင်ခုန်ဖွယ်အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှ
၀တ္ထုတိုလေးတွေအဖြစ်ရေးဖွဲ့ဖြစ်တော့ စာဖတ်သူတွေ က လူနှစ်
ယောက်တွေ့ဆုံပြီးလိင်ကိစ္စဖြစ်ပျက်ကြတာ မြန်ဆန်းလွန်းသည်တဲ့။ ဘာကြောင့်
နေထိုင်ရတာ အဆင်ပြေသည်ဟုပြောရ လည်းဆိုတော့ မိမိအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်
အသက်မွေးမှုအလုပ်အကိုင်၊ နေထိုင်ဖို့နေရာ၊ မိမိရဲ့လိင်ကိစ္စအတွက်
ဖုံးအုပ်ထားစရာ မလိုဘဲ့ မြို့ကြီးမှာ ကံကောင်းစွာ ပျော်ရွှင်နေရလို့ပါ။
ဝေမျှတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေက မြန်တယ်လို့ပြောလို့မရအောင် ကျွန်တော်ကပဲ
ခပ်မြန်မြန်လှုပ်ရှား တတ်လို့လားမသိ။ ကဲ...လွန်ခဲ့သော သုံးလေးရက်က
ခပ်ဟော့ဟော့ ကောင်ငယ်လေးတစ်ယောက်နှင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ လေးတွေပြန်ပြော
နေ့တစ်နေ့ရဲ့ ခရီးကိုစီစဉ်မှုဟာ Self Storage မှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲ
ကျန်ပါတော့တယ် ကတ္ထူသေတ္တာအချို့အတွက်လေ။ ကျွန်တော့်ရဲ့တစ်နေ့တာဟာ
အရေးတကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ ကြာရှည်လွန်းလှပါတယ်။ သူများတွေလို
ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ တစ်ယောက် ယောက်နှင့် date ပြီး ကဲဖို့ အခွင့်မရခဲ့တော့
ဆာလောင်နေတာ စိတ်ထဲမယ်။ လတ်ဆတ်ပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ ၀က်အူချောင်းတုတ်တုတ်
ကြီးတွေ ကိုက်ဝါးပစ်လိုက်ရရင်ကောင်းမယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲက ငနဲတွေကြား
ခပ်အေးအေး အကဲခပ်ကြည့်တော့ ကျွန်တော် စိတ်ဝင် စားတဲ့ပုံစံ မျိုးတွေ
Self Storage အများအပြားရှိတဲ့ဘက်ကားကိုဆွဲချလာတော့ ပိတ်ကုန်ပြီလားမသိ
ကားတစ်စီးမှ ကားပါကင်မှာရပ်ထားတာမရှိဘူး ရုံးခန်း ဘက်ကြည့်ရင်လည်း
ရုံးခန်းဘက်ကိုနီးကပ်လာတော့ စာရွက်တစ်ခုခု တံခါးမှာကပ်ထားတာ
သတိထားမိတာကြောင့် မနီးမဝေးမှာ ကားကိုပါကင်ထိုးလိုက်ရင်း
ဘာစာရွက်များကပ်ထားလဲသွားဖတ်ကြည့်မိပါတယ်။ ဘာမှမရေးထားပါဘူး အထူးတလည်။
တံခါးဘေးက ခလုပ် အနီရောင်ကို နှိပ်ပါ၊ အကူအညီပေးမည့်
၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ယောက်ရောက်လာပါ့မည့် အကြောင်းလေးရေး ထားတာ။
ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာ တစ်မိနစ်သို့မဟုတ်
နှစ်မိနစ်လောက်အကြာမှာ ခပ်သြသြအသံတစ်ချက် ပြန်ဖြေ သံကို
စပီကာတစ်ခုကကြားရတယ် သူ အခုချက်ချင်းရောက်လာမယ်တဲ့။ ခပ်မြန်မြန်
ကျွန်တော်လည်း 'အိုကေ'လို့ အဖြေပေးလိုက်ကာ ကားထဲက ကတ္ထူသေတ္တာအချို့ကို
မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ ဂိတ်တံခါးဖွင့်သံကြားရကာ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်
ရုံးခန်းရှိရာ လျှောက်လှမ်းလာတာကို မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူ ကျွန်တော်နှင့်
ငယ်ရွယ်သော တက်ကြွဟန် အချိုးကျပြီး ဆွဲဆောင်မှု ပြင်းသော ကောင်ငယ်လေး။
ကောင်ငယ်လေးဆိုပေမဲ့ အရပ်အမြင့်က ၆ပေလောက်ရှည်တယ်။ အညိုရင့်ရောင်
ဆံနွယ်ရှည်တွေနဲ့။ ဆံနွယ်အချို့က သူ့မျက်လုံးတွေပေါ် ဝေ့၀ဲကျနေသေး။ Levis'
ဂျင်းဘောင်းဘီ ခပ်ကြပ်ကြပ်ကိုသူဝတ်ထားတယ်၊ Flannel ရှပ်အင်္ကျီနှင့် အလုပ်
သမားတွေဝတ်တတ်တဲ့ boots ကို ခြေထောက်မှာလျှိုထားပြန်တာ။
ကျွန်တော်ဝတ်နေကျစတိုင်လ်ပဲဗျ။ ကျွန်တော့်ရှေ့ရောက် တော့ ပါးချိုင့်ပေါ်
အောင်ပြုံးရင်း 'ပိတ်တော့မှာမို့ ၀င်းတစ်ခုလုံးလိုက်စစ်ဆေးနေတာကြောင့်
ချက်ခြင်းမရောက်နိုင်တာ sorry ပါ'တဲ့ပြော တယ်။ ကျွန်တော် ကလည်း 'ရပါတယ်
ကျွန်တော့်နံဘေးကနေ ရုံးခန်း တံခါး ဆီလျှောက် သွားတယ်။
အိုး...ကျွန်တော့်ငပဲက ဖြစ်သွားပြီး ကျွန်တော့်နှလုံးခုန်သံဟာ
ကားပြိုင်ပွဲတစ်ခုအလားဖြစ်စပြုရော။ သူ ကသာ တောင်းဆိုသမှု ပြုရင် သူ့
ရှေ့ကျွန်တော် ဒူးထောက်ပြီး သူ့ပေါင်ကြားက ငပဲကြီးကို....ရှီး...အား..။
သူ တံခါးကိုဖွင့်ကာ ကျွန်တော့်ကိုအထဲဝင်စေပါတယ်။
'ဘယ်အရွယ်အစားလိုချင်တာလဲဗျ' တဲ့ သူက ကျွန်တော့်ကိုမေးတာ။ 'ခပ်ကြီး
သူ့ပစ္စည်းဆီရောက်သွားတဲ့ ကျွန်တော့် မျက်လွှာကိုပင့် သူ့မျက်ဝန်းတွေကို
စိုက်ကြည့်ရင်း ခပ်ကြီးကြီးသေတ္တာနှစ်လုံးဆို အိုကေပါတယ်
သူ့မျက်နှာက သေလောက်တဲ့အပြုံးကို ဖော်ပြရင်း ကျွန်တော့်နံဘေးက
ဖြတ်လျှောက်သွားရင်း သေတ္တာအလွတ်နှစ်လုံးကို ညွန်ပြတယ်။ 'တခြားဘာလိုသေးလဲ'
သူကမေးတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေက သူ့ပေါင်ခွဆုံကို
အကြည့်တစ်ချက်ရောက်ပြန်တော့ ထူးထူးခြားခြား ကို
'တခြားဘာအလိုရှိပါသေးသလဲခင်ဗျာ?' ကျွန်တော့်ကို ယဉ်ယဉ်ကျေး
ကျေးထပ်ပြီးမေးကာ သူ့လက်က ဂျင်းဘောင်းဘီခွဆုံကို
ကျွန်တော်ဘာမှမပြော ရပ်တန့်နေကာ သူ့ပေါင်ခြံက အထုပ်ကြီးထွားလာတာကို
ကြည့်နေမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို လျှာနှင့် သရပ်ရင်း
သူ့ကိုပြောမိတာက 'ဒီမေးခွန်းက မင်းကိုမေးရမှာလို့ ကိုယ်တော့ထင်တာပဲ'
သူစကားထပ်မဆိုတော့ဘဲ ကျွန်တော့်နံဘေးက တံခါးကိုလော့ခ်ျလုပ်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ ပြန်လှည့်လာကာ နောက်ဘက်က အခန်း တစ်ခုစီ ဦးတည်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။
'ခင်ဗျားလိုချင်တဲ့ဟာ ဒီ အထဲမှာရှိတယ်လို့ ထင်တာပဲဗျ'တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း
ခပ်မြန်မြန် သူ့နောက်ကနေ အနောက်ဘက်ကအခန်းထဲလိုက်သွားလိုက်တာပေါ့။
ပေါင်ခြံက သူ့ငပဲကိုလက်တွေနှင့် ခပ်ဖြေးဖြေးပွတ်သပ်ကာ သူရပ်နေတယ်။
အပြုံးကမပျက် သူ့လက်တွေနှင့် ကျွန်တော့်ပခုံးကိုကိုင်ပြီး
ဒူးထောက်ထိုင်အောင် သူခိုင်းတော့ ကျွန်တော်လည်း အလိုက်သင့်ပေါ့။
သူ ဂျင်းဘောင်းဘီက ကြယ်သီးကိုဖြုတ် ၊ ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဆွဲချ၊ပြီးတော့
သူ့ငပဲကို သူဆက်လက်ပွတ်သပ်နေပါတယ်။ အဖြူရောင်သူ့ အောက်ခံဘောင်းဘီအောက်က
ငပဲကြီးဟာ ဆိုဒ်ကောင်းကောင်းရှိမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်။
နောက်တော့ သူက ဒီပစ္စည်းက 'ခင်ဗျားရှာနေတဲ့အရာလို့ထင်တာပဲနော်'
လို့ပြောပြီး သူ့ငပဲကို ဘောင်းဘီအပြင်ဘက်ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ငပဲက
အမျိုးသားပိုင် ပစ္စည်းထဲမှာ တော်တော်ပုံစံလှတာပဲ။ သူ့ငပဲက
မမာ့တမာအနေအထားရှိပြီး ကြည့်ရတာ ၆လက်မလောက်ရှိနေပြီ။ သူ့ငပဲကို ကိုင်ပြီး
ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကိုဖွင့် သူ့ငပဲခေါင်းကို အရင်စငုံလိုက်ပါရဲ့။
စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ သူ့ငပဲဟာမာတောင်လာပြီး အနည်း ဆုံး
၇လက်မလောက်ရှည်လာကာ တုတ်လည်းတုတ်လာပါတယ်။ သူ့လက်တွေက
ကျွန်တော့်မျက်နှာကို သူ့ငပဲဆီပိုပြီး မျက်နှာမူစေတယ်။ မကြာမီမှာပဲ
ကျွန်တော့်ပါးစပ်အတွင်းပိုင်းထဲအထိ ဖိပြီးသွင်းတယ်။ နောက် ပြန်ပြီးတော့
ဆွဲနှုတ်ပြန်ရော။ သူ့စိတ်ကြိုက်လုပ်နေတာကို ခဏတော့ လွှတ်ထားလိုက်တယ်။ ဒါမှ
နောက်တစ်ကြိမ် လျောကနဲပါးစပ်ထဲကို ဖိသွင်းချိန်မှာလက်နဲ့
အသာသူ့ငပဲကိုဆွဲကိုင်လိုက်ကာ သူ့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကို ကျွန်တော်
စတင်လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ငပဲထိပ်ပိုင်းလေးကို လျှာနှင့်ပတ်လည်လျက်၊
အသာလေးငုံကာ တပြွတ်ပြွတ်စုပ်၊ ကျွန်တော်တတ်သမျှနှင့်ပြုစု တာပေါ့နော်။
သူ့ငပဲရဲ့ထိပ်ပေါက်ကလေးက အရည်ကြည်လေးတွေစို့ထွက်လာတော့မှ သူ့ငပဲခေါင်းကို
စစ်ဆင်ရေးလုပ်နေခြင်းမှ ရပ် တန့်လိုက်ပါတယ်။ အသက်ကို၀၀ရှူ၊ ပါးစပ်ကိုဟကာ
သူ့ငပဲတစ်ခုလုံး ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲရောက်နိုင်သမျှ သွင်းလိုက်တာ
လည်မျိုထဲ ရောက်ကာ အော့အံမိမလိုဖြစ်မှရပ်ဖြစ်တယ်။
သူ အထုတ်အသွင်း အသာလုပ်နေပြီးမှ တစ်ချက်အပြင်ဆွဲအထုတ်မှာ
ကျွန်တော်ထပ်မသွင်းစေတော့ဘဲ လက်နဲ့ထိန်းကိုင်ကာ စုတ်မှုတ် ပေးလိုက်ပါတယ်။
သူ့နှုတ်ဖျားမှ ညည်းညူသံတွေထွက်လာတာကို ကြည့်ခြင်းဖြင့်
ကျွန်တော်ပြုစုတာကို သူကြိုက်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှား ပါတယ်။ ခဏကြာတော့
ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို ဆွဲကိုင် ပါးစပ်ကိုဟစေသာ သူ့ငပဲကိုထည့်ပြီး
အထုတ်အသွင်းလုပ်ပါရော။ ကျွန်တော့်-ီး စုပ်မှုထက်အလွန် ပိုပြီး
ကျွန်တော့်ငပဲကို ထိန်းကိုင်ကာ ရွှေဥတွေကို လျှာလေးနှင့်လျက်
တစ်လုံးခြင်းငုံစုပ်ပေးပါတယ်။ သူ ငြိမ်ပြီးခံစားနေတော့ ကျွန်တော့်လက်
ချောင်းတွေက သူ့တင်ပါးရဲ့အလယ် ခရေ၀ရှိရာဆီကို ရှာဖွေမိတာပေါ့။တင်းပြီး
လုံးဝန်းနေတဲ့ သူ့တင်သားတွေကို ပွတ်သပ်ဖျစ် ညှစ်ပြီး သကာလ
ကျွန်တော် သူ့ငပဲကို အားရပါးရစုပ်မျို လိုက်တိုင်း သူ့တင်ပါးတွေက
ကျစ်ကျစ်ပြီး မာသွားတာဗျ။ရွှေဥတွေကို လျာနှင့်လျက်ပြီး ကစားနေတုန်းတော့
သူ့ခရေ၀ထဲလက်ချောင်း လေးတွေ အသာထိုးထည့်ကြည့်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်နေသလဲဆိုတာ မကြာခင်သိလာရပါပြီ။ သူ့ဆီကရမည့်
အရသာတစ်ခုခု စမ်းသပ်ရယူချင်နေခြင်းပါ။ သူ့ရဲ့အတွင်း
သူ့ခရေ၀ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ကလိမိပါတယ်။ ကျွန်တော် ညင်သာစွာ ဒါပေမဲ့ အားပါ
စွာဖြင့် သူ့ကိုတစ်ဖက်လှည့်ပြီး ကုန်းစေတော့ သူက Pro တစ်ယောက်လို
အလိုက်သင့်ဗျ။မို့မို့ဖောင်းပြီး ကားကားစွင့်နေတဲ့ သူ့တင် သားတွေကို
အသာဖြဲကိုင်ပြီး ပန်းသွေးရောင်ထနေတဲ့ ခရေ၀ကိုကြည့်ရင်း 'ဂလု' ကနဲ
တံတွေးမျိုချမိပါရဲ့။ တင်ပါး အကွဲကြောင်းတ လျှောက်နှင့်တကွ
ခရေ၀အားလုံးကို လျာကစားပစ်လိုက်တယ် သူ့နှုတ်ဖျားကညည်းညူသံတွေထွက်ကရော။
သူ့အသက်ရှူသံဟာ ပြင်းထန်လာပြီအခု။ ပြီးတော့ ညည်းညူသံဟာ ပိုမိုသိသာလာပြီး
သူ့ငပဲထိပ်က အရည်ကြည်တွေ တစိမ့်စိမ့်ထွက်နေရော။ 'Oh yeah!
ဖင်ကိုကောင်းကောင်းလျက်ပေးပါ...အ၊ လျာနှင့်ထိုးပေး...အ...အ' တဲ့
ကျွန်တော် သူ့ခရေ၀ကို ဆက်ပြီး ကလိနေတော့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ
တဖြည်းဖြည်းတုန်လာကာ သူ့ရွှေဥတွေဟာလည်း ကျစ်ပြီး ပေါင်ခြံ
ကိုကပ်စပြုလာပြီ။ ကျွန်တော်သိတယ် သူ့ရွှေပြွှန်က
နို့ပျစ်ပျစ်တွေပန်းထုတ်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ။ ကဲ...တစ်ခါ ကျွန်တော်က
ဦး ဆောင်ပြီးသကာလ သူ့ကိုကျွန်တော့်ဘက်ပြန်လှည့်ကာ
မျက်နှာမူစေလိုက်ပါတယ်။ သူ့ငပဲက ကျွန်တော့်ကိုတည့်တည့်ကြီး မြှားတံလို
ချိန်ရွယ်နေရော။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြားထဲမှာ သူ့ငပဲထိပ်က
အရည်ကြည်တွေကြောင့်ရော ကျွန်တော့်တံတွေးများကြောင့်ရော စိုရွှဲနေပါပြီ။
ကျွန်တော် ခပ်ဖွဖွရွရွလေး စုပ်ပြုပေးနေတာမှာ သူနောက်ဘက်ကိုပြန်ဆုတ်ပြီး
ငပဲကိုထုတ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ် ဟာ စတင်ပြီး
တုန်ခါလာတာကိုလည်း ခံစားရပါရဲ့။ သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းပေါ်
ထိန်းထားရင်း နှုတ်ဖျားကတော့ ညည်းညူ သံတွေဟာ အားပါပါ မာန်ဟုန်ပြင်းပြင်း။
ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေထဲရှိနေဆဲ သူ့ငပဲဟာ ပိုမိုမာတောင်လာသလို
ငပဲပေါ်မှာရှိ သွေးကြော ကြီးတွေဟာ ထောင်ထနေရော။ ကျွန်တော်တစ်ချက်
ခပ်ပြင်းပြင်း စုပ်မျိုလိုက်ရာမှာတော့ သူ့ငပဲက နို့ပျစ်ပျစ်တွေဟာ
ပါးစပ်ပြည့်ခမန်း ထုတ်တော့တယ်။ ကျွန်တော်က မလွှတ်သေးဘဲဆက်ပြီး
စုပ်ပြုနေတော့ သူ့ခမျာ ခြေဖျားတွေ ဒိုးဒိုးဒန့်ဒန့်ဖြစ်ကာ
ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ထပ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ဖြည့်သည်ပေါ့။
သူ့ငပဲဟာ မာန်ဟုန်ပြင်းပြင်း မာထန်နေပြီးခဏ တဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်သွားကာ
သူ့ငပဲကိုအသာပြန်ဆွဲနှုတ်တာကို ကျွန်တော်ခွင့်ပြုလိုက်တာမှာ ငပဲထိပ်ဝက
အရည်လေးတွေ တွဲလွဲခိုနေတော့ ကျွန်တော့်လျှာဖျားလေး တွေက
ပါးစပ်ထဲက အရည်တွေကို အမှိုက်ပုံးထဲထွေးထည့် ပါးစပ်ကို
တစ်ရှူးနှင့်သုတ်ရင်း ကောင်လေးမျက်နှာကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ သူ့
ကျွန်တော့်ပခုံးတွေကို ထိန်းကိုင်ပေးရင်း ကျွန်တော်ကြမ်းပြင်မှာ
ငုတ်တုတ်ထိုင်ရာကနေထဖို့ကူညီပါတယ်။ သူ့ဘောင်းဘီကိုပြန်ပြီးဆွဲ တင်ဝတ်ကာ
ကျွန်တော်တို့ အရှေ့ရုံးခန်းဘက်ကို ပြန်ထွက်လာကြတာပေါ့။
ဘယ်လိုလဲ ဘော်ဒါတို့ရဲ့ ကောင်ချောလေးနှင့် အခွင့်သင့်လို့ တွေ့တယ်။
ဆန္ဒညီတော့ ပတ်သက်တယ်လိင်ကိစ္စ။ မြန်တယ်ပြောပြော မဖြစ်နိုင်ဘူးပဲပြောပြော
ကျွန်တော်ကတော့ ဖြစ်ပျက်ပတ်သက်ခဲ့ပြီပဲလေ။ ယုံချင်ယုံ
(Advice to Parents on How to Cope WithaGay Son oraLesbian Daughter)
မေမေ၊ ဖေဖေ၊ သားက Gay ပါ
သားသမီးတိုင်း ယုံကြည်တက်ကြွ ဖျတ်လတ်ရဲရင့်ပြီး သူချစ်တဲ့ ချစ်သူခင်သူနဲ့ အသက်ရှည်အနာမဲ့စွာ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ သဘာဝအတိုင်း ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးနေထိုင်သွားတာမျိုးကို မိဘတိုင်းက ကျိန်းသေမျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်။ ရာနှုန်းပြည့်လူအတော်တော်များများဟာ ဆန့် ကျင်ဘက်လိင်ကို နှစ်သက်သဘောကျခြင်းသည် သဘာဝဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးလည်းထားတတ်ကြပါတယ်။ လိင်တူခြင်းကြိုက်နှစ် သက်သူများ ကိုတော့ သဘာဝမကျ မှားယွင်းနေသူများအဖြစ်ခံယူကြပါတယ်။ မိဘတွေဟာ လိင်တူခြင်းကြိုက်နှစ်သက်သူများကို ရှုံ့ချတဲ့ အရာမသွင်း တဲ့ စကားလုံးများပြောကြားခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ လိင်တူခြင်းကြိုက်နှစ်သက်သူများနှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုက်ရိုက်ဘက်လိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်များ ကိုလည်းကောင်း သူတို့ပတ်ဝန်းကျင် သူတို့မိသားစု ယုံကြည်အားကျရသောသူများထံမှ သိသိသာသာပဲဖြစ်ဖြစ် မသိမသာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြုံဖူးမြင်ဖူးလက်ခံဖူးနေတာများတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ သား သို့မဟုတ် သမီးက 'မေမေ၊ဖေဖေ၊ သား(သို့)သမီးက Gay ပါ' လို့ ပြောတဲ့အခါ ဘာလုပ်ကြမှာပါလဲ။
Accept - လက်ခံပေးပါ
အဦးဆုံးနှင့် အဓိကပြောချင်တာက သူတို့သင့်ကိုပြောကြားနေတာများကို လက်ခံနားထောင်ပေးပါ။ ပြီးတော့ သူ့တို့ရဲ့အစစ်အမှန် ဘ၀ကို လျစ်လျူမရှုပြစ်ပါနဲ့။ တစ်ခုခုသောနည်းလမ်းဖြင့် သင်လက်ခံလိုတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ပြောင်းလဲစေမယ့်နည်းလမ်းများ သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းများ မပြလုပ်တာ၊ ပြီးတော့ သင်လုပ်နိုင်တဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံး နည်းလမ်းနဲ့ လက်ခံဖို့ကြိုးစားတာမျိုးလုပ်ရ ပါမယ်။ သူတို့ ရဲ့အတွင်းကျကျစကားများကို ပြောဆိုတိုင်ပင်လာရင်လည်း ကျေနပ်လက်ခံပါတယ်ဆိုတာ သူတို့ကိုပြောပြရပါမယ် ပေါ့နော်။ အထက်ပါ အကြောင်းအရာတွေကို သူတို့အားပြောဖို့ တကယ့်ကို သက်သောင့်သက်သာမရှိဘူးဆိုရင်လည်း တကယ့်ကို ရိုးရိုးသားသားပဲ သင့် သဘောဆန္ဒကိုပြသလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကို သင်ရဲ့ချစ်ခင်မှုအား သိစေအပ်သလို သူတို့ထုတ်ဖော်ပြောပြ လာတဲ့ အကြောင်း အရာခံစားချက်တို့အပေါ် သေချာပေါက် လေ့လာသင်ယူရပါမယ်။
Ask Questions - အမေးစကားဆိုပါ
အမေးစကားများဟာ သင့်သား သို့မဟုတ် သမီးနှင့် စကားစမြည်စတင်ပြောဆိုဖို့ အကောင်းမွန်ဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခု ပါပဲ။ အဲဒီလို အမေးစကားများပြောဆိုခြင်းဖြင့် သင်ဟာ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေ ဖြစ်တည်မှုတွေအပေါ် ဂရုတစိုက်ရှိကြောင်း ပြသရာရောက်ပါတယ်။ အမေးစကားတစ်ချို့ဟာ သင့်ကို သူတို့နှင့် ပိုမိုဝေးကွာစေမယ်ဆိုတာလည်း သတိထားသင့်ပါတယ်။ သူတို့ကို သင်က ငြင်းပယ်လိုက် မှာကိုစိုးရွံ့တာ၊ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို မိဘဖြစ်တဲ့ သင့်အား ထုတ်ဖော်မပြောပြမီမှာ သင့် သား သို့မဟုတ် သမီးဟာ တော် တော်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေခဲ့မယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။သတ္တိဆိုတာရဲ့အလွန်မှာ သူတို့ဘ၀အစိတ်အပိုင်းကို သင့်အားထုတ် ဖော်ပြ ခြင်းမှာ သူတို့ကို စိတ်ပျက်အားငယ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခံစားမသွားစေချင်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့တစ်ကိုယ်ရေ ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားချက်များ သို့မဟုတ် ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့ စိတ်သဘောထားယိမ်းယိုင်မှုများထက် သူ့တို့ကိုတန်ဖိုးထားချစ်ခင်မှုဟာ ပိုမိုသာလွန်ပါကြောင်းဆို တာကို ပြသရပါမယ်။သူတို့ကို အမေးစကားဆိုချင်ရာမှာ အမေးထုတ်သင့်တယ်လို့ယူဆတဲ့ မေးခွန်းအချို့ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁) ဘယ်အချိန်ကစပြီး သား သို့မဟုတ် သမီးက gay/lesbian ဖြစ်တယ်ဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သလဲ?
(၂) gay/lesbian ဖြစ်နေခြင်းအပေါ် ဘယ်လိုခံစားရသလဲ သား (သို့မဟုတ်) သမီး?
(၃) သား သို့မဟုတ် သမီးမှာ boyfriend/girlfriend ရှိနေပြီလား?
(၄) ဒီအကြောင်းအရာကို တစ်စုံတစ်ယောက်အား မျှဝေ အသိပေးပြီးနေလား?
(၅) (ဖေဖေ၊မေမေ) က သား သို့မဟုတ် သမီးကို ဘာများအထောက်အပံ့လုပ်ပေးစေချင်သလဲ?
Do Not Ask or Make These Comments
မမေးသင့် သို့မဟုတ် မပြုလုပ်သင့်သည့် မှတ်ချက်- ဝေဖန်မှုများ
(၁) gays/lesbians တွေက အိပ်ယာထဲမှာ ဘာလုပ်ကြသလဲ? ဒီမေးခွန်းက သင့်သား သို့မဟုတ် သမီးကို စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ် သွားစေနိုင်ပါတယ်။ တကယ့်ကို သင်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အင်တာနက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာတက်ရောက်ရှာဖွေဖတ်ရှုကြည့်ပါ။
(၂) သား (သို့မဟုတ်) သမီးက အမျိုးသမီးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် အမျိုးသားတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်နေသလား ? လိင်တူခြင်းကြိုက် နှစ်သက်မှုမှာ လိင်အမျိုးအစားသက်သေအမှတ်တံဆိပ်က ဘာမှအလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ Lesbians ဆိုတာက ယေဘုယျသဘောသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများကို ချစ်ခင်နှစ်သက်နေခြင်း၊ ပြီးတော့ gay men တွေက အမျိုးသားတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်နေခြင်းဆိုတာ တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အသွင်ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်သူများတောင်မှာမှ လိင်တူခြင်းကိုမကြိုက်နှစ်သက်သူများရှိနေနိုင် တာကိုလေ့လာသင့်ပါတယ်။ Transgender အသွင်ဆောင်နေပြီဆိုရင်တောင် သင့် သား သို့မဟုတ် သမီးကိုထပ်မံလေ့လာဖို့လို အပ်သေးတာကိုသတိပြုပါ။
(၃) သား (သို့မဟုတ်) သမီးတော့ ကုထုံးပညာရှင်တစ်ယောက်နှင့် သွားတွေ့သင့်တယ်? ဒီလိုပြောဆိုတာကတော့ စော်ကားမှုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုပြောလိုက်ခြင်းက သင့်သား သို့မဟုတ် သမီးရဲ့ အမျက်ဒေါသခံစားမှုကို သင့်ဆီဦးတည်မိအောင်ပြုလုပ်သလို ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အထက်ပါစကားကို ဆိုလိုက်ခြင်းဟာ သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှု ခံစားချက်တွေကို လက်မခံတဲ့ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သွားစေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
မိဘအများစုဟာ ကြီးမားတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွန့်စားမှုကြီးတစ်ခုနှင့် အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းသွားရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျယ်ပြန့်လှတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားခံစားမှုများ (ဒေါသ၊ စိတ်ကသိကအောက် ငြင်းဆန်လိုမှု၊ အကူအကယ်ရာမဲ့တဲ့ခံစားချက်၊ သစ္စာသွေဖယ်ခြင်း၊ ၀မ်းနည်း အားငယ်မှု) ကိုအမျိုးအမည်သစ်တစ်ခုအဖြစ် တွေ့ကြုံခံစားကြရပါတယ်။မည်သို့ဆိုစေ သင့် သား သို့မဟုတ် သမီး၏ လိင်တူခြင်းကြိုက် နှစ်သက်နေမှုကို လက်ခံဖို့ ခဲယဉ်းနေမှာတော့ အမှန်ပါပဲ။ လက်မခံဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဘက်ကို ဦးတည်လိုက်မယ်ဆိုရင် သင်နှင့် သူတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက် အကြီးအကျယ်ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်စေပါတယ်။ Social and Psychology and Personality Science ရဲ့လေ့လာချက်တစ်ခုအရ လူငယ်လူရွယ်လေးများဟာ ငြင်းပယ်မှုကို ခံစားလိုက်ရပြီဆိုလျှင် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အစွန်းရောက် သော အကျင့်စရိုက်အပြုအမူများစီ ဦးတည်မည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များချဖြစ်သွားနိုင်ပါရဲ့။
- မိမိကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ကြိုးပမ်းမှု
- အကြမ်းဖက်သော၊ဆိုးသွမ်းလူငယ် ဖြစ်လာမှု
- မူးယစ်ဆေးဝါး သို့မဟုတ် အရက်သေစာ သုံးစွဲမှု
- ဘေးအန္တရာယ်အလွန်များသည့် လိင်နှင့်ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများနှင့် စွဲဆောင်ခံရမှု
- ၀မ်းနည်း စိတ်ဓာတ်ကျလာမှု
အချို့သော ကိစ္စရပ်များကြောင့် လူငယ်အချို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အပြုအမူအကျင့်များကို ဖေးမတဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများကိုအလိုရှိပြီး မိဘဆွေမျိုးများနှင့် ဆန့်ကျင်ကာ မိဘအိမ်တွေကို စွန့်ခွာသွားတတ်ကြပါတယ်။ တူညီသော လေ့လာချက် အရ အမျက်ဒေါသများလျော့နည်းသွားဖို့၊ စိတ်ဓာတ်ကျအားငယ်မှုများနည်းဖို့၊ ပြီးတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ယုံကြည်ချက်မြင့်မား ဖို့ဆိုတာတွေဟာ လူငယ်တွေကို အရင်ဆုံး အားပေးဖို့နဲ့ ဖေးမမှုတွေက အရေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သင့် သား သို့မဟုတ် သမီးရဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံးစိတ်ဝင်စားလက်ခံမှုကို သင့်စိတ်အခြေခံမှာ ဘယ်လိုရှိရှိ လက်ခံဖို့စိတ်ထည့်လိုက်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသော သူတို့အပေါ်စိတ်ဝင်တစားရှိလိုက်ခြင်းပါပဲ။ သင် သို့မဟုတ် သင့်ရဲ့သား၊သမီးတွေ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး မိသားစုအ၀န်းအ၀ိုင်းမှာ ပျော်ရွှင် စွာ နေထိုင်အသက်ရှင်နေတာကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက်က အလိုရှိကြမှာအမှန်ပဲမဟုတ်လား။သူတို့ရဲ့ အရာအားလုံးကို မကြိုက်လက်မခံဘူး၊ သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုတွေကိုကို မနှစ်သက်နေဘူးဆိုရင်တောင် သူတို့ဟာ ဘယ်သူတွေဆိုတာကို အရင်မျက်နှာမူလိုက်ပါ။ သူတို့ရဲ အမူအကျင့်သွားလာလှုပ်ရှားဆက်ဆံမှုများအပေါ်မှာ ဘယ်လိုအချက်တွေကတော့ ကြိုက်တယ် ဘယ်အချက်တွေကိုတော့ လက်မခံဘူးဆိုတာတွေကို ပွင့်ပွ့င့်လင်းလင်း စစ်ထုတ်ပြောပြပြီး သင့်ကလေးရဲ့ အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ပျော်ရွှင်ကျန်းမာမှုကို ရှေးရှုပေး သင့်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာတတ်မြောက်မှု၊ လူအများနှင့် ကျွမ်းဝင်မှုတွေမှာ မိမိကြောင့် မိမိသားသမီးများအရှက်ရ အားငယ်စေတာမျိုးမဖြစ်စေဘဲ သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုမှာ အန္တရာယ်ကင်းပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေမယ့်အရာများဖြင့်ပြည့်နှက်နေရမယ် မဟုတ်လားလေ။ သူတို့က ရင်မှဖြစ်သော သားသမီးများဖြစ်ပါတယ်။
Get Support - အကူအညီအထောက်အပံ့
သင့်ကိုယ်သင် ကူညီအားပေးဖို့ ရှာဖွေကြံဆသင့်တာလေးတွေကို ရှာဖွေကြံဆသင့်ပါတယ်။ သင့်သားသမီးတွေဆီကနေ ရမယ့် အထက် ပါသတင်းမျိုးတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ မိဘတွေအတွက် မလွယ်ကူပါဘူး။။ သင့်ခံစားချက်မှုများကို သင့်ခင်ပွန်း၊ ဇနီး၊၊ အမျိုးသား သူငယ်ချင်း၊ ညီမ၊ အစ်ကို သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ကို(စိတ်သဘောထားပွင့်လင်းသူ၊ သင့်ကိုနာကျင် တဲ့ခံစားမှုကို မပေးမဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့ သင့်ကိုလက်ခံနားလည်ပေးမဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်) မျှဝေပြောပေးကြည့်ပါ သင်ဘယ်လို ခံစားဖြတ်သန်း နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့။ 1972 က New York City မှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PFLAG (Parents and Friends of Lesbian and Gays) အသင်းအဖွဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး အကူအညီရယူကြည့်ပါ။ သူတို့အသင်းအဖွဲ့ဟာ LGBT တွေရဲ့ အသက် မွေးဝမ်း ကျောင်းမှု ပညာရေး၊ လူသိရှင်ကြားထောက်ခံပြောဆိုမှုတွေ နှင့် အခြားသောအကူအညီအထောက်အပံ့တွေကို ကူညီဖြေရှင်း ပေးနေ တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က အလားတူ PFAG အသင်းအဖွဲ့မျိုးရှိလား ရှာဖွေကြည့်ပါ။ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုပေးနိုင်တဲ့ နေရာ များရှိသလား မေးမြန်းကြည့်ပါ။ online ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ PFAG နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုဌာနများမှနေပြီး သတင်းအရင်း အမြစ်များ ထောက်ပံ့ကူညီမှုများကို ရယူပါ။
Alex Aung (25 November 2011)
Reference: Mom, Dad, I'm Gay – Advice to Parents on How to Cope WithaGay Son oraLesbian Daughter
by Esmeralda Carvalho
စာကြွင်း။ ။ Esmeralda Carvalho က http://www.lesbianmomtoday.com မှ စာရေးဆရာမတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ website ဟာ လိင်တူကြိုက်နှစ်သက်သူ အမျိုးသမီးများရဲ့ အမေများနှင့် သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်များကြား ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ အုပ်ထိန်းမှု၊ ကျန်းမာစွာ အသက်ရှင်သန်နေထိုင်မှု၊ ရုပ်ရှင်များ၊ ခရီးသွား နှင့် အခမ်းအနားများနှင့် ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့ website ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ Sociology and Psychology နှင့် B.A (Honours) ရယူထားသူဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် Alex Aung အနေနှင့်တော့ ပညာရှင်မဟုတ်တဲ့အတွက် ဘာမှဝင်ရောက်အကြံဥာဏ်မပေးတတ်ပါဘူး။ မိမိသားသမီးက လိင် ကူကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်နေသည်ဆိုဦးတော့ ကျန်းမာပျော်ရွှင်အန္တရာယ်ကင်းပြီး မိသားစုအ၀န်းအ၀ိုင်းမှာ အေးအေးသက်သာနေထိုင် နေစေရေးကိုသာ ပိုမိုအရေးပေးမိမှာပါပဲ။ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ပြောဖူးသလို 'မိမိသဘောမတူသည့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှင့် အိမ်ထောင်ပြုထားသူတစ်ဦးအဖြစ်' သဘောထားလို့မရဘူးလားလို့ပဲဆိုချင်ပါတယ်။
ယောက်ျား ပန်းသေ-ပန်းညှိုးဖြစ်တာနဲ့ သောက်ဆေးတွေ ဆက်စပ်မှုရှိ
ED ရောဂါဟာ တကမ္ဘာလုံးမှာ ဖြစ်ကြတာ များတယ်။ အသက် ၆ဝ ကျော်ရင် ၃၅% မှာ ပန်းသေ-ပန်းညှိုး ရှိနေကြတယ်။
ယောက်ျားတွေဟာ (Medications) ဆေးများများသောက်လေလေ Erectile Dysfunction (Impotence) ပန်းသေ-ပန်းညှိုးဖြစ်နိုင်ခြေ များလေလေဖြစ်တယ် လို့ Kaiser Permanente သုတေသီတွေကနေ British Journal of Urology International မှာ ထုတ်ဖေါ် ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ ဖြစ်စေနိုင်တာသာမကဘူး ဖြစ်နေရင်လဲ ပိုဆိုးစေနိုင်ပါသေးတယ်။
California Men's Health Study ကနေ Diana C. Londoño က ဦးဆောင်ပြီး၊ ၄၆ နှစ်ကနေ ၆၈ နှစ်ကြားအရွယ်ရှိတဲ့ အတန်းအစားပေါင်းစုံက ယောက်ျားပေါင်း ၃၇၇၁၂ ယောက်ကို ဆန်းစစ်ခဲ့တာပါ။ ၂ဝဝ၂ ကနေ ၂ဝဝ၃ ကြားမှာ ဒီအရွယ်ရောက် ယောက်ျားတွေ သောက်ခဲ့တဲ့ ဆေးမှတ်တမ်းတွေကို စုဆောင်းပါတယ်။ အဓိကဆေး ၃ မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ED နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အများဆုံး လေ့လာတွေ့ရှိတဲ့ ဆေးအမျိုးအစားတွေကတော့ -
၁။ Antihypertensive drugs သွေးတိုးကျဆေးတွေ၊ ဥပမာ Thiazides, Beta blockers နဲ့ Clonidine ဆေး၊
၂။ Psychogenic drugs စိတ်ရောဂါဆေးတွေ၊ ဥပမာ SRRIs, Tricyclic antidepressants, Monoamine oxidase inhibitors နဲ့ Lithium ဆေး၊
၃။ Testosterone pathways ကို တားဆီးစေတဲ့ တခြားဆေးတွေ၊
၂၉% ဟာ အသင့်အတင့်ကနေ ဆိုးဝါးတဲ့ ပန်းညှိုးရောဂါကို ခံစားနေကြရသူတွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ ဆေးတွေလဲ သောက်ရတယ်။ အသက်လဲ ကြီးတယ်။ BMI (body mass index) ကိုယ်ခနာအရွယ်အစားဂဏန်းလဲ မြင့်တယ်။ စိတ်ဓါတ်လဲ ကျတယ်။ ဆေးလိပ်လဲ သောက်ကြတယ်။ သွေးဖိအားလဲ များတယ်။ ဆီးချိုလဲ ရှိတယ်။ (ကိုလက်စထော) လဲ မြင့်ကြတယ်။
- ဆေး မသောက်ရသူနဲ့ ၂ မျိုးအထိသောက်နေရသူ = ၁၆၁၂၆ ယောက် = အသင့်အတင့် ပန်းသေရာနှုန်း = ၁၅့၉%၊
- ဆေး ၃ မျိုးကနေ ၅ မျိုးအထိသောက်နေရသူ = ၁ဝဝ၄၆ ယောက် = အသင့်အတင့် ပန်းသေရာနှုန်း = ၁၉့၇%၊
- ဆေး ၆ မျိုးကနေ ၉ မျိုးအထိသောက်နေရသူ = ၆၈၇ဝ ယောက် = အသင့်အတင့် ပန်းသေရာနှုန်း = ၂၅့၅%၊
- ဆေး ၁ဝ မျိုးမက သောက်နေရသူ = ၄၆၇ဝ ယောက် = အသင့်အတင့် ပန်းသေရာနှုန်း = ၃ဝ့၉%၊
လေ့လာသူတွေထဲက ၅၇% ဟာ ဆေး ၃ မျိုးမက သောက်နေရသူတွေ ဖြစ်တယ်။ အသက်ကြီးလေလေ ဆေးသောက်ရတာ များလေလေ တွေ့ရတယ်။
- ၅ဝ-၅၉ နှစ်ရှိသူ ၅၃% ဟာ ဆေး ၃ မျိုးမကသောက်နေကြရတယ်။
- ၆ဝ-၇ဝ နှစ်ရှိသူ ၆၆% ဟာ ဆေး ၃ မျိုးမကသောက်နေကြရတယ်။
- အဲလိုလူတွေထဲက ၇၃% ဟာ BMI က ၃၅ မှတ်ရှိလို့ အလွန်ဝသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။
- ၂၅% ဟာ ဆေး ၁ဝ မျိုးမက သောက်နေကြတယ်။
ED ရောဂါရှိနေသူတွေမှာ သောက်နေကြတဲ့ဆေးဟာ ရောဂါအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေနဲ့ ဆက်စမ်မလား သတိထားရမယ်။
• Atherosclerosis သွေးလွှတ်ကြောကျဉ်းရောဂါ၊
• Coronary artery disease နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊
• Trauma ထိခိုက်ဒဏ်ရာ၊
• Surgery ခွဲစိတ်ကုသမှု၊
• Alcoholism အရက်စွဲရောဂါ၊
• Certain medications ဆေးဝါးတချို့၊
• Stress စိတ်ဖိအားများ၊
• Depression စိတ်ဓါတ်ကျ၊
• Thyroid diseases လည်ပင်းကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါ။
အဲဒီရောဂါစာရင်းထဲက အများစုဟာ Nitric oxide နည်းစေတတ်တယ်။ (နိုက်ထရစ်-အောက်ဆိုက်) ဆိုတာ Erection ကျား-လိင်အင်္ဂါ သန်မာလာစေအောင်နဲ့ ထိန်းထားနိုင်အောင် လုပ်ဘို့ရာမှာအဓါကကျတဲ့ Neurotransmitter အာရုံကြော သတင်းပို့လွှတ်တဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။
"လူနာကို ရောဂါတခုခုအတွက် ဆေးပေးရရင် Erectile dysfunction ပန်းသေ-ပန်းညှိုး ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဆရာဝန်တွေက ခေါင်းထဲမှာ ထည့်ဘို့ သတိပေးချက်တခု ဖြစ်ပါတယ်" လို့ Kaiser Permanente Southern California က Quality & Clinical Analysis အရည်အသွေးနဲ့ ဆေးကုသမှု လေ့လာသူ Michael Kanter ကနေ ပြောလိုက်ပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 7:41 PM No comments:
Transgender ဆိုတာ ဘယ်သူတွေကို ခေါ်တာလဲ။
Transgender ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရစကားလုံးက ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်နေထိုင်တဲ့ သူတွေကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာလိုပြောရရင်တော့ ဥပမာ- ယောက်ျားလေးဆိုရင် မွေးလာတုန်းကတော့ ယောက်ျားလိင်အင်္ဂါနဲ့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လို့ သူ့ရဲ့ တကယ့်သဘာဝ လိင်စိတ်ခံယူမှု အစစ်အမှန်ကတော့ မိန်းကလေးလိုပဲခံယူတယ်၊ မိန်းကလေးလိုပဲ ၀တ်စားနေထိုင် ပြုမှုချင်တဲ့သူပေါ့။ မိန်းကလေးဆိုလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ မွေးလာတုန်းကတော့ မိန်းမလိင်အင်္ဂါနဲ့ပါ ဒါပေမယ့် လိင်စိတ်ခံယူမှုကတော့ လုံးဝသဘာဝအတိုင်း ယောက်ျားလေးလိုပဲ နေထိုင်ပြုမှုဝတ်စားဆင်ရင် ချင်သူတွေပါ။
Transgender တွေကို ကျနော်တို့မြန်မာ့လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ အရပ်စကားနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အပွင့်မ၊ ဂျီမတွေနဲ့ ယောက်ျားလျာလေးတွေကို ပြောချင်တာပါ။ အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ၀တ်စားဆင်ရင်နေထိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးကို ခြုံငုံပြီးတော့မှ အင်္ဂလိပ်လို Transgender လို့ သုံးနှုန်းလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ Transgender တိုင်းဟာ လိင်တူချင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ အမျိုးသားတွေ၊ အမျိုးသမီးတွေ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ၀တ်စားဆင်ယင်နေထိုင်ပေမယ့်လို့ ယောက်ျားချင်း၊ မိန်းမချင်း စိတ်မ၀င်စားတဲ့သူတွေ အများအပြာရှိပါတယ်။
Cross Dresser ဆိုတာကရောဘယ်သူတွေလဲ။
Cross Dresser ဆိုတာကလည်း ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ၀တ်စားဆင်ယင်နေထိုင်တဲ့သူတွေကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ကပြောခဲ့သလိုပဲ Cross Dresser တိုင်းက လိင်တူစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။
Drag Queen ဆိုတဲ့သူတွေကရော ဘယ်သူတွေလဲ။
Drag Queen ဆိုတာကလည်း ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ၀တ်စားဆင်ယင်နေထိုင်တဲ့သူတွေကို ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ်လို့ များသောအားဖြင့် Drag Queen ဆိုတဲ့စကားလုံးက ယောက်ျားလေးကနေ မိန်းကလေးတယောက်လို ၀တ်စားဆင်ယင်နေထိုင်တဲ့ သူတွေကိုသာ ခိုင်းနှိုင်းခေါ်ဆိုထားတဲ့ စကားလုံးပါ။ အထူးသဖြင့် Drag Queen ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်လေ့ရှိတဲ့ အပွင့်မတွေ၊ ကချေသည်၊ ကားဗရက်ရှိုးတွေထဲကလို အကမယ်တွေကို ခေါ်ဆိုတာများပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ တေးဆို၊ တေးသရုပ်ဖော် အနုပညာစွမ်းရည်ကို အသုံးပြုပြီး ရှောက်သီးဆေးပြားရောင်းတဲ့ အပွင့်မတွေကိုလည်း ခေါ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ သတိထားစရာတချက်က Drag Queen တိုင်းသည်လည်း လိင်တူချစ်သူမဟုတ်ပါ။ အချို့သော အမျိုးသားတွေဟာ လိင်တူချစ်သူ မဟုတ်ပေမယ့် Drag Queen လိုဝတ်စားဆင်ယင်ပြီး ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုအတတ်ပညာကို ကိုယ့်ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်တခုအနေနဲ့ ရွေးချယ်ပြီး ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
Transgender တွေကို ဘာကြောင့်ခွဲခြားဆက်ဆံကြတာလဲ။ အဓိကအကြောင်းအရင်းကဘာလဲ။
ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်နေထိုင်တဲ့ သူတွေကို ခွဲခြားဖိနှိပ် ညှင်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ကြဖို့ရန်အတွက် တွန်းအားပေးနေတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကတော့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေက ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့ "လူ့လောကမှာ မိန်းမနဲ့ ယောက်ျားဆိုတဲ့ လိင်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်" ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ကနေ စတင်တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ကလေးတယောက်မွေးလာပြီဆိုရင်ပဲ သူ့ရဲ့လိင်အင်္ဂါကိုကြည့်ပြီးတော့ ချက်ချင်းဆိုသလို လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ယောက်ျား၊ မိန်းမဆိုတဲ့ ပုံစံခွက်ထဲကို သွတ်သွင်းလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်ကစပြီး လူတွေဟာ ကိုယ်ရဲ့ဆန္ဒပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ယောက်ျား၊ မိန်းမဆိုတဲ့ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီအောင် ကိုယ်ရဲ့အတွေးအခေါ်၊ အပြုအမူ၊ ၀တ်စားဆင်ယဉ်မှု၊ နေထိုင်သွားလာမှု စသဖြင့် အစစအရာရာအားလုံးကို လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်အောင်ဆိုပြီး ကြိုးစားအသက်ရှင်ကြရတော့တာပါ။
အဲဒီပုံစံခွက်တွေထဲကမှ အဆိုးဝါးဆုံးသော ပညတ်ချက်တွေကတော့၊ ဘယ်လိုလူမျိုးကိုပဲ ချစ်သင့်တယ်၊ ဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့မှ အတူလက်ထပ်ထိမ်းမြား ပေါင်းသင်းနေထိုင်သင့်တယ်၊ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေနဲ့မှ ချစ်တင်းနှောသင့်တယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ချက်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေဟာ နှစ်တွေကြာလာတော့ သဘာဝတရားတခုလို ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေဟာ အချိန်တိုင်း၊ နေရာတိုင်း၊ လူတိုင်းအတွက် အမြဲတစေမှန်ကန်နိုင်တဲ့အရာတွေတော့ ဖြစ်မနေပါဘူး။
အမှန်တကယ်မှာတော့ လောကကြီးမှာ မိန်းမနဲ့ ယောက်ျားဆိုတဲ့ လိင်စိတ်ခံယူမှုနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ လက်ခံယုံကြည်ချက်နဲ့ ယောက်ျား၊ မိန်းမအတွက် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းကနေ လက်ခံယုံကြည် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အတွေးအခေါ်စံနှုန်းစံထားတွေဟာ လုံးဝသက်သက်စင်အောင်ကို လွဲမှားနေတဲ့ အတွေးအခေါ်ယုံကြည်မှုတရပ် ဖြစ်နေပါတယ်။
အဲဒီမှားယွင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်ယုံကြည်မှုကပဲ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်နေထိုင်တဲ့ သူတွေအပေါ် ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရသော်လည်းကောင်း၊ နည်းမျိုးစုံသော ခွဲခြားဖိနှိပ် ညှင်ပန်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ရန်အတွက် အဓိကတွန်းအားတခု ဖြစ်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Transgender Day of Remembrance (TDoR) တီဒေါးဆိုတာဘာလဲ။
ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်နေထိုင်သူများ (Transgender) အတွက် အမှတ်တရနေ့ (တီဒေါး) ဆိုတာ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်နေထိုင်သူတွေကို မုန်းတီးတဲ့သူတွေရဲ့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ ကမ္ဘာတလွှားက Transgender တွေကို အောက်မေ့သတိရတဲ့ နေ့ရက်တရက်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်တရနေ့ဖြစ်တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ရောက်တိုင်း ကမ္ဘာတလွှားမှာရှိတဲ့ လိင်တူချင်းချစ်သူတွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးလေးစားလိုက်နာသူတွေက အောက်မေ့သတိရတဲ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကျင်းပလာခဲ့ကြတာ ဒီနှစ်နဲ့ဆို ၁၃ နှစ်တိုင်တိုင် ပြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်ကို တီဒေါးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ရတာလဲ။
လူ့သမိုင်းတလျောက်မှာ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်နေထိုင်သူတွေကို ကွတ်မြက်သတ်ဖြတ်လာခဲ့ကြတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ အများအပြာရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုလူမျိုးတွေကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကိုတော့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းက သဘာဝတရားအတိုင်း ဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စရပ်တခုလိုပဲ လစ်လျူရှုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ မက်ဆက်ချူးဆက်ပြည်နယ်၊ သြောစတန်မြို့က ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်နေထိုင်သူ ရီတာ ဟက်စတာ (Rita Hester) ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ အချိန်ကနေစပြီးတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လိင်တူချင်းချစ်သူများ အခွင့်အရေးအတွက် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူတွေက ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေ အနာဂတ်မှာ ဆက်မဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့ရောက်တိုင်း ဖယောင်တိုင်မီးထွန်းပြီး ဆန္ဒပြုကြရာကနေ ဒီအမှတ်တရနေ့ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်မှာ ဒီအထိမ်းအမှတ်နေ့ကို အမှတ်တရ ကျင်းပပြုလုပ်လျက် ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
Transgender တွေဘယ်လိုညှင်းဆဲနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ကြရပါသလဲ။
ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ၀တ်စားဆင်ယင်နေထိုင်တဲ့သူတွေဟာ တခြားသာမန်လူတွေ သတ်ဖြတ်ခံရတာထက် ဆိုးရွားတဲ့ နည်းလမ်းမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ အသတ်ခံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနည်းလမ်းတွေကတော့ နောက်ကျောကနေ ဓါးနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ထိုးခံရခြင်း၊ လည်လှီးခံရခြင်း၊ မုဒိမ်းကျင့်ခံရခြင်း၊ စံပြအနေနဲ့ ကြိုးဆွဲချသတ်ဖြတ်ခံရခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကားနဲ့တိုက်သတ်ခံရခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါဖြတ်တောက်ခံရခြင်း၊ ကာလီဘိုင်ကဲ့သို့သော လက်နက်များဖြင့် အပြစ်သတ်ခံရခြင်း၊ သေနတ်ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ပစ်သတ်ခံရခြင်း၊ ဘေ့စ်ဘော လက်ကိုင်တုတ်ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း၊ ကားနဲ့ဒရွတ်တိုက်ဆွဲ၍သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း၊ မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း အစရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေဟာ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ၀တ်စားနေထိုင်တဲ့သူတွေ ဒီကနေ့ တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ အန္တရာယ်တွေထဲက အနည်းအကျဉ်းမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်နေထိုင်တဲ့အတွက် အသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ လူတွေရဲ့စာရင်းကို ဒီအင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Transgender တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာရော ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်နေသေးလဲ။
"Transrespect versus Transphobia Worldwide" အဖွဲ့က ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၄င်းတို့ရဲ့ သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တခုကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြသွားတာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ကနေစပြီး ၂၀၁၁ စက်တင်ဘာလအထိ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေတန လေ့လာချက်အရ လေးနှစ်တာကာလအတွင်း ကမ္ဘာတလွှားမှာ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ပြောင်းလဲနေထိုင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သတ်ခံလိုက်ရတဲ့အမှု စုစုပေါင်း ၆၈၁ မှု ရှိခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီထက်ပိုပြီး ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာဆိုရင် ပထမကိုးလအတွင်းမှာတင် အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ Transgender အရေအတွက် စုစုပေါင်း ၁၁၆ မှု ရှိခဲ့တယ်လို့ TvT အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
TDoR နေ့ကို ဘယ်လိုကျင်းပကြလဲ။
နိုင်ငံတကာမှာ TDoR နေ့ရောက်ရင် သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်လို ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်နေထိုင်တဲ့ သူတွေကို အောက်မေ့သတိရတဲ့အနေနဲ့ ဖယောင်းတိုင်ဆီမီးထွန်းညှိပြီး အသိအမှတ်ပြု ကျင်းပလေ့ရှိကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
"လူသားတိုင်း တူညီတဲ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ အခွင့်အရေး ရှိတယ်ဆိုတာကို လက်ခံရင် ဒီနေ့ရက်ရောက်တိုင်း ဖယောင်းတိုင်ဆီမီးထွန်းညှိပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ဆင်နွဲကြပါစို့"
သက်တံ့အယ်ဒီတာအဖွဲ့။ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်။
လိင်တူစိတ်ဝင်စားသူအမျိုးသားများအတွက် ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းရှစ်သွယ်
အမျိုးသားများတွေအတွက် ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုဆိုင်ရာ နည်းပေးလမ်းညွှန်လေးတွေကို ဆောင်းပါးတစ်စောင် ဒါမှမဟုတ် blog တစ်ခုမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖတ်ဖူးခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးဖတ်ပြီးချိန်မှာတော့ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများရဲ့ အကြံဥာဏ်နှင့် အထင်အမြင်ကို တောင်းမိကြလိမ့်မယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်? ဒါပေမဲ့ အဲဒါကပဲ စာဖတ်သူများရဲ့ ဘော်ဒါတွေ အခုထိ single ဖြစ်နေကြခြင်းအကြောင်းပြချက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာ ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံခြင်း ဥပဒေသတွေက စိတ်အစဉ်ကိုရှုပ်ထွေးနေစေပြီး အခြေခံကျတဲ့နည်း လမ်းလေးတွေကိုမေ့လျော့နေတတ်ကြတယ်လေ။ ကျွန်တော့်မှာ ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုနည်းဥပဒေသတွေထဲကမှ အခြေခံကျတဲ့နည်းလမ်း လေးတွေကို စဉ်းစားထားတာရှိပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေက ကျွန်တော်တို့လိုအမျိုးသားအများစုအတွက် လွယ်ကူရိုးစင်းပြီး အခြေခံကျတဲ့ စိတ်ခံစားမှုလေးတွေဆီ ပြန်လည်ချဉ်းကပ်ကာ နှစ်သက်မှုရကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ် အမျိုးသားတွေဟာ စကားစမြည်လက်ဆုံကျ ပြောဆိုကြရာမှာ စကားလုံးတွေကိုသာ အာရုံထားနေကြပါတယ်။ အမျိုးသား အများစုဟာ တောက်ပတဲ့အလင်းရောင်အောက် လူတွေအများအပြားကြားမှာ မိမိဟာ ဘာဖြစ်တယ်၊ ဘယ်လောက်စွမ်းတယ်ဆိုတာ ပြောနေ၊ပြသနေရရင် စကားလုံးတွေရဲ့အလွန် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် တွေ့ဆုံချဉ်းကပ်နေခြင်းအပေါ် လျစ်လျူရှုမိတတ်ကြပါ တယ်။ ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုတစ်ရပ်မှာ အမျိုးသားတိုင်းဟာ တစ်စုံတစ်ရာသော အာရုံစိုက်မှုကို လိုချင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့် မိမိတွေ့ဆုံနေတဲ့ လူအပေါ် အမှန်တကယ်အာရုံစိုက်ကြောင်း သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေအပေါ် စိတ်ဝင်စားပါကြောင်း ပြသဖို့အတွက် မျက်ဝန်းတွေကို တွေ့ဆုံဆက်သွယ်မှုလေးတွေပြုပေးခြင်းဟာ သူနှင့်ပတ်သက်၍ ဒီလိုည(ဒီလိုအချိန်အခါ)လေးဟာ အထူးသီးသန့်ဖြစ်တယ်လို့ စိတ်ချက် လက်ချ ခံစားသွားရစေနိုင်ပါတယ်။
အမေးထုတ်ဖို့ မမေ့သင့်သလို အဖြေကိုနားထောင်ဖို့လိုပါကြောင်း
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူ့ကို သင့်အကြောင်းတွေကို သိမြင်စေချင်တယ်။ အဦးဆုံးသောချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှု အကြိမ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သင့်အ ကြောင်းအလုံးစုံကို သူသိသွားဖို့ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကို သေသေချာချာ သင်အဖြေပေးဖို့လိုသလို စကား စမြည်ပြောဆိုရာမှာ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့အရာ သိစေချင်တဲ့အရာကို မသိမသာလမ်းကြောင်းပြပြောဆိုအဖြေပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမေး တဲ့အကြောင်းအရာတွေက အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားလို့မေးနေတာလားဆိုတာကိုလည်း သေချာအောင်စူးစမ်းရမယ်။ ပြီးတော့ အမေး ထုတ်သူရဲ့ အကြိုက်တွေ စိတ်ဝင်စားမှုတွေကို ပြန်လည်သိမြင်နားလည်အောင် လုပ်ရမှာ အသေအချာပေါ့။ ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ အရာ တစ်ခုကို ထင်မြင်ဆွေးနွေးကြရမှာ ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်ကိုပဲ တဖက်သတ် လက်ကိုင်ထား ငြင်းဆိုတာမျိုး မလုပ်ဘဲ တစ်ဖက်လူရဲ့ ထင်မြင် ချက်ကိုလည်း လက်ခံဆွေးနွေးပေးရမှာပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ ရှိရပါမယ်။ အဲဒါက သင့်မှာ ဥာဏ်ရည်ဥာဏ် သွေး ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ပြသရာရောက်ပြီး သူ့ထင်မြင်ချက်အပေါ် လေးစားမှုရှိကြောင်းကိုလည်း ပြဆိုရာရောက်တာပေါ့။ လူ တစ်ယောက်မှာ သူ့စိတ်နှင့် သူ့ကိုယ် လွတ်လပ်စွာ ပိုင်ဆိုင်မှုရှိနိုင်ပြီး ပြောဆိုပိုင်ခွင့်လည်းရှိနေတာ မမေ့သင့်ပါဘူးနော်။
အလွန်ရိုးစင်းတဲ့စကားသံပဲလို့ထင်ရပါတယ်။ အမျိုးသားအရေအတွက်အနည်းငယ်လောက်ဟာ မိမိအောင်မြင်အောင် ကြိုးစားခဲ့မှုရဲ့ အသီးအပွင့်ဖြစ်တဲ့ အလုပ်အကိုင်ရာထူး၊ လစာ စသည်တို့အပေါ် လွင့်မျောနေပြီး သူဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ပြသလိုမှုတွေ အား အစဦးပိုင်းချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုမှာပဲ တွေ့မြင်လိုက်ရချိန်မှာ ကျွန်တော့်ကို အံ့သြမှင်တက်မိစေတာတော့အမှန်ပါပဲ။ ဟုတ်တော့ဟုတ် ပါတယ် ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုရလဒ်တွေနှင့် ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရည်အချင်းတွေကို ပြသလိုတာတော့မှန်ပေမဲ့ အဲဒါတွေမပါတဲ့ မိမိကို အမှန် တကယ်စိတ်ဝင်စားစေဖို့ အစဦးပိုင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ အရေးမကြီးဘူးလားဟင်။
ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ စကားအဓိပ္ပါယ်ကို သဘောပေါက်မှာပါနော်။ အဲဒီလိုလူမျိုးတွေအပေါ် သင့်အနေဲ့ ရက်သတ္တပတ်တွေ သို့မဟုတ် လတွေမှာပဲ စိတ်ဝင်စားမှုလျော့ကျသွားမလားစဉ်းစားရပါ့မယ်။ သူတို့တွေက သူတို့ရာထူးလစာတွေအပေါ်သာယာနေပြီး မိမိဘာလုပ် တယ် မိမိကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာအပေါ်ရော လေးစားသမှုရှိပါ့မလား။ တကယ်လို့သူတို့တွေက သင့်အပေါ် လက်ရှိအနေအထားမှာကိုပဲ စိတ်ဝင်စား လက်ခံပါတယ်ဆိုရင်တော့အိုကေပေါ့နော်။
အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ သူ့မူဟန်သူ့စရိုက်ကို လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှမပြောသာပေမဲ့ အားကျရုံသက်သက် အစမ်းသဘော သက်သက်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးတွေနဲ့တော့ အိုကေပါကြောင်း ဟန်မဆောင်သင့်ပါဘူး။ အချိန်ကြာလာတာနှင့်အမျှ မိမိကိုယ်မိမိ လိမ်ညာနေ ကြောင်း ခံစားလာမိပါလိမ့်မယ်။အင်း....ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုနည်းလမ်းလေးတွေကိုလည်း မမေ့သင့်ဘူးနော်။ အဲဒါတွေက တကယ်အရေးပါလို့ အကြံဥာဏ်လေးတွေပေးထားကြတာပါ။
အဦးအစတွေ့ဆုံမှုတွေမှာ ကိုယ်ဟန်အမူအရာက အရေးပါသလား?
အဦးအစချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်တဲ့အကြိမ်အနည်းအငယ်အတွင်းမှာ လှပတဲ့ပန်းပွင့်တွေက မိမိရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု ကိုယ်ဟန်အမူ အရာ တွေအပေါ် အတော်အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုပြုတဲ့အချိန်တွေမှာ ပန်းပွင့်တွေဟာ အံ့သြစရာခံစားမှုတွေပေးကြောင်း ဒါမှမဟုတ် သင်ကိုယ်တိုင် ပန်းစည်းလေးတွေ ယူဆောင်သွားခြင်းဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာတွေဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း ပြောပြလိုခြင်းဟာ အမျိုးသားတွေအတွက် ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုနည်းလမ်းအချို့မှာ တစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံချိန်မှာ ပန်းတွေကိုယူဆောင်သွားခြင်းဟာ လက်ဗလာနဲ့သွားတာထက်စာရင် တစ်ဖက်သားအတွက် ခံစား မှုကိုပိုမိုပြည့်စုံသွားစေမှာပါ။ သူ့အပေါ်ထားတဲ့ သင့်ရဲ့ခံစားချက်အပေါ် သူသတိမထားမိပဲနေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သုံးကြိမ် သို့မဟုတ် လေးကြိမ်မြောက်လောက်မှာတော့ သူသည်လည်းပဲ သင့်အတွက် ခပ်သေးသေးလက်ဆောင်တစ်ခု သို့မဟုတ် ပန်းစည်းလေးတစ်စည်း ယူဆောင်လာခြင်းဖြင့် ကြည်နူးရတဲ့ခံစားမှုလေးကို သင်လက်ဖျားခါမိတဲ့အထိ ကျေနပ်စွာလက်ခံရရှိမိမှာပါ။
ဘာကြောင့်လဲ? သင်ဟာ သူ့အတွက် အချိန်ပေးတယ်၊ ပြီးတော့ သူ့အတွက် နှစ်သက်ဖွယ်ခံစားမှုတစ်ခုခုကို ယူဆောင်လာပေးတယ်ဆို တဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို သူသိပြီး သင်နှင့်အတူဆိုရင် အပြင်ကိုအတူထွက်လည်ပတ်ဖို့ မငြီးငွေ့ဘူးဆိုတာ သင်လည်းပြန်လည် အလိုလိုသိရှိ ရရှိလာမှာကြောင့်ပေါ့။ အဲဒါကဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်ဆောင်နေသလဲဆိုတော့ သူက သင့်အပေါ်ပေးတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေဟာ သူ့နှလုံးသား ကလာနေတဲ့ ခံစားမှု လက်ဟန်ခြေဟန်တွေဖြစ်ကြောင်း ပြဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားများအတွက် မကြာခဏအမှတ်တမဲ့ကျော်သွားတတ်လေ့ရှိကြတဲ့ ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုဆိုင်ရာ နောက်ထပ်နည်းလမ်းလေးတစ်ခု ကတော့ တခုတ်တရမဟုတ်ပေမဲ့ သတိတရ သိမ်းထားသင့်တဲ့ အရာလေးအကြောင်းပြောပြချင်ပါသေးတယ်။
သင့်ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံရမှုဟာ အထင်ကြီးစရာနှင့် စိတ်ကူးယဉ်အဆန်ဆုံးအဖြစ် ဖြစ်တည်သွားအောင် မလုပ်ခဲ့မိဘူး။ ဒါဆို ရင်တော့ အဲဒီလိုမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဟာ အရာအားလုံးရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကို စတင်လုပ်ဆောင်ဖို့ ခက်ခဲပါလိမ့် မယ်။ နှစ်တွေလတွေကျော်လွန်လာလို့ ကိုယ်တွေရဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ သို့မဟုတ် အထူးအချိန်ကာလနေ့ရက်ဆိုတာတွေကို ကျင်းပ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးချင်တဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ။
ပထမဆုံးအကြိမ် စတင်ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုမှာ ကော်ဖီ သို့မဟုတ် လက်ဖက်ရည်ထွက်သောက်မယ့်အစား တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းတဲ့ ညစာ စာ့းပွဲလေးတစ်ခုကိုဆင်နွှဲသင့်ပါတယ်။ အကြံဥာဏ်ပေးရရင် နှစ်လိုဖွယ်ရှိတဲ့ နေရာအချို့ ဒါပေမဲ့ ထသွားထလာ အဆင်ပြေမယ့်နေရာ တစ်ခုကို သွားရောက်သင့်ပါတယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျများမယ့်နေရာကိုမဆိုလိုပါဘူး။ နှစ်ဦးသားအတွက် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်ပြီး လူစုလူဝေးသိပ်မများတဲ့နေရာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါ။ ဒါကြောင့် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပြောချင်တဲ့စကားကို ကျယ်လောင်စွာ ပြောဖို့မလိုအပ်တဲ့ ကိုယ်ပြောလိုတဲ့စကားကို လွတ်လပ်စွာပြောလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုကို တူနှစ်ကိုယ်တွေ့ဆုံဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပါလို့နော်။
အလုပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး စကားများများပြောဆိုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ အမြဲတမ်းလိုလို အခုပြောမယ့် အမျိုးသားများအတွက် ချိန်းဆို တွေ့ဆုံမှုနည်းလမ်းလေးကို သတိရနေသင့်ပါတယ် - လူတစ်ယောက်ဟာ သင်ဘာလုပ်တယ် ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိလိုတတ်ကြတာ သဘာဝပါ။ သင့်အနေနဲ့ သူတို့အတွက် ပုံကြမ်းလောက်ပဲပေးသင့်ပြီး ပုံချောအနုစိတ်ကိုတော့ မပေးသင့်ဘူးပေါ့။
သင့်အနေနဲ့ တစ်ဖက်လူကို ကောင်းကောင်းမသိမြင်သေးခင်အထိ သင့်အလုပ်အကိုင်တွေ လစာ ရပိုင်ခွင့်တွေအကြောင်းကို အပေးအယူ သဘောမျိုးဖြစ်စေမယ့် စကားသုံးတွေနှင့်ပြောခြင်းကိုလည်းရှောင်ရပါ့မယ်။
တကယ်လို့ အဲဒါတွေကိုပြောဆိုမိမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်လေသံတွေကို ကြွားဝါနေခြင်း သို့မဟုတ် သူစဉ်းစားပါလိမ့်မယ် သင်ဟာ သင့် အလုပ်အကိုင်အပေါ်မှာ စွဲလမ်းခုံမင်က တစ်ဖက်သားကို ဂရုစိုက်တတ်ပါ့မလားစသဖြင့် ထင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သူ့ရဲ့စိတ်ခံ စားချက်အစစ်အမှန်ပုံရိပ်ဟာ ပေါ်ထွက်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူး၊ သင့်အပေါ် စောင့်ကြည့်မျှော်လင့်နေသူတစ်ယောက်တော့ရှိတတ်တယ်။ သူဘာလိုချင်တယ် ဘာလုပ်ချင် တယ်ဆိုတာ မပြောဘဲနဲ့။ အဲဒါက မျှော်လင့်ချက်ကို ဆောက်တည်နေခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုတွေများဖြစ်နေခဲ့ရင် နှစ်ယောက်သား ဆက်ဆံရေးမှာ သင်ဟာ မငဲ့ကွက်တတ်သူ၊ ပြီးတော့ သင့်ကိုယ်သင်သာ မဏ္ဍိုင်ထားဆက်ဆံတတ်သူအဖြစ် ပေါ်လွင်နေစေပြီ။
အကြောင်းတစ်စုံတရာများဖြစ်ပေါ်လျှင် သင်နောက်ကျ ရှောင်ဖယ်နေခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပြီး အဆက်အသွယ်ပြုကာ တောင်းပန်ရှင်း ပြခြင်းက သူထိုင်ပြီး စိတ်ဒုက္ခရောက်စောင့်ဆိုင်းနေရခြင်းအကြောင်းရင်းကို သိသွားစေနိုင်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုစောင့်ဆိုင်း မျှော်လင့်နေရချိန်မှာ သူ့အတွက်စိတ်သက်သာရာသက်သာကြောင်း တစ်ခုခုလုပ်ကိုင်နေနိုင်တာပေါ့လေ။
(ဒီနေရာမှာတော့ အွန်လိုင်းသုံးသူအမျိုးသားများအတွက် ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုနည်းလမ်းတစ်ခုပြောချင်တာပါ။ အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ တစ်ဘက်သားကိုတွေ့ဆုံဖို့ အစီအစဉ်ရှိနေတယ်ဆိုရင် IM တစ်ခုခုကိုအသုံူးပြုဝင်ရောက်လိုက်တာနဲ့ 'meet' ဆိုတဲ့ မေးလ်မက် ဆေ့စ်တိုလေးတစ်ခုခုကို ပို့ထားသင့်ပါတယ်။)
ဘယ်လိုလူတစ်ယောက်ကမှ သူ့ကို ဟာသသဘောထားတာ၊ ဂရုမထားတာမျိုးကို မခံစားချင်ကြပါဘူး။ တကယ်လို့သင်က သူ့ကို နောက်တစ်ပတ်မှာ ဆက်သွယ်မယ်လို့ပြောထားရင် နောက်တစ်ပတ်မှာ သေချာပေါက်ဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုပါ။ နောက်တစ်ပတ်ကျော်မှ ဒါမှမဟုတ် နောက်တစ်လမှ မဆက်သွယ်ပါနှင့်။ သင်အဲဒီလိုသာလုပ်ခဲ့ရင် စိတ်ပေါက်ပြီး အော်ဟစ်သင့်တဲ့အချက်ဖြစ်သွားပါမယ်။ 'ငါမင်းကို ဒီကိစ္စမှာ အလေးထားပြီး စောင့်မျှော်ခဲ့ပါတယ်....ပိုပြီးကောင်းလာမယ်မထင်ဘူး ငါတို့ဆက်ဆံရေးမှာ' လို့လေ။
တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ တစ်ဘက်လူနဲ့ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုမှာ နောက်ထပ်တွေ့ဆုံဖို့ စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူးဆိုရင် ဘာတစ်ခုမှ ကတိ မပေးပါနှင့်။ 'ပျော်စရာအချိန်လေးကို ရခဲ့ပါတယ်၊ ကောင်းသောညပါ' လို့ ရိုးရိုးလေးသာပြောလိုက်ပါ။ ကတိကိုအလွယ်တကူပြုခြင်းဟာ သင့်နာမည် သင့်ပုံရိပ်အပေါ် တန်ဖိုးမထား ဂရုမပြုတဲ့ပုံသဏ္ဌာန်ပေါ်လွင်နေလို့ပါ။
အထက်မှာပြောပြခဲ့တဲ့ လိင်တူစိတ်ဝင်စားသူ အမျိုးသားများအတွက် ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းလေးရှစ်သွယ်ကို စိတ်ထဲမှာ တေးမှတ်ထားမယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုကိစ္စမှာ များစွာ သို့မဟုတ် အနည်းငယ်တော့ အောင်မြင်မှုရလာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီနည်းလမ်းတွေအတိုင်း ဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သင့်အိပ်မက်ထဲက အမျိုးသားနှင့် ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုမှာ ပိုမိုအောင်မြင်ဖို့အလားအလာရှိလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။
Alex Aung (26 July 2011)
Posted by Alex Aung at 11:10 PM No comments: